Wholesale Zvemotokari Mota Zvigadzirwa Vagadziri & Vatengesi | Berlin
Guangzhou Berlin Auto Zvigadzirwa Zvekugadzira Co., Ltd.
Kia Ac comedor
Mahindra AC Commingor
Perodu Ac compressor
Simba rinopinda rack
Yakanakisa mhando Yakanakisa Sevhisi
Tinogona kuburitsa TM13-TM31 compressor
Unyanzvi Hydraulic Simba Rinodzora Rack Pane Fekitori Mutengo
Semumwe weavo vane hunyanzvi hweHydraulic steering Rack vagadziri, Berlin inoshanda mukugadzira mota yekugadzirisa mweya compressors uye mudhiraivho Rack. Iyo steering rack chigadzirwa ine yunifomu mhando yemhepo kutenderera. The tembiricha mumhepo uye hama mwando kunge homogenized kuichengeta zvine musoro yunifomu.
Isu tinogadzira Fixed& Anoshanduka misha compressor.
Yakanakisa Hunhu ESP Uye Magetsi Mota Steering Rack Wholesale
Unoda kutsvaga auto zvikamu kambani inopa yakakwira-mhando simba rekufambisa pani? Tarisa vhidhiyo iyi uye uzive zvimwe zvakawanda nezve ESP Uye Electric steering rack nemutengo wakazara kubva kuGuangzhou BERLIN Zvigadzirwa Zvekugadzira Co., Ltd.
& aftermarket sevhisi kune yako AC zvikamu
& Zvikamu zvekutungamira
Isu tine yakasimba kwazvo uye neruzivo R
& D uye QC timu inotungamirwa nevanjinjini veJapan vane makore anopfuura makumi mana ruzivo
mu compressor, tinopa OEM uye aftermarket sevhisi. Tinogona kukudziridza uye kugadzira compressors kubva 110cc-450cc, izvo zvinogona kushandiswa mufambi motokari, injiniya motokari uye firiji rori. Kana iwe usingakwanise kuwana chigadzirwa chaunoda pawebhusaiti yedu, inzwa wakasununguka kuti utaure nesu, tichakutarisa. Kana isu tisina chigadzirwa chaunoda, isu tinokwanisa kukudziridza iwe zvinoenderana nezvaunoda Tinogona kupa kudhirowa uye muyenzaniso kuti iwe usimbise.
MaJapan mainjiniya timu
ane makore anopfuura makumi mana ane ruzivo
Rimwe gore garandi
Isu tinopa kune OE mota
Zvigadzirwa zvedu zvakahwina zvitupa zvakawanda maererano nehunhu uye nehunyanzvi
Guangzhou BERLIN Auto Zvikamu Zvekugadzira Co, Ltd, yakavambwa muna 2006, ibhizimusi remazuva ano rinogadzira mukugadzira mota yemhepo inotonhodza compressors. Kambani yedu inowana muZhuliao Industrial Zone Baiyun Dunhu reGuangzhou Guta, inovhara nzvimbo yemahekita makumi maviri uye nzvimbo yemuti inodarika zviuru gumi zvemamirimita. Inoshongedzerwa nekutakura kwakaringana ne5KM kure neBaiyun International Airport uye vanopfuura mazana maviri evashandi vanosanganisira vanopfuura makumi mashanu mahunyanzvi ehunyanzvi. Uye zvakare, isu zvakare tine yakazvimiririra R& D timu uye nyanzvi yekutengesa timu yakamirira kukupa yakanakisa sevhisi kwauri.
Iyo kambani ine yepamusoro-soro manejimendi timu. Yakapfuura IATF16949 certification uye ndeimwe yevaashoma vekugadzira dzimba kuti vanyatso gadzira. Yakaunza akasiyana siyana epamberi ekugadzira uye ekuyedza michina inosanganisira yeJapan yakazara makomputa egungano mitsara, machining centre, Taiwan bhenji bhenji, Germany helium leak michina, ultrasonic yekuchenesa muchina, vharumu impregnation michina, kuronga uye kuyera chiridzwa, metallurgical microscope, pneumatic yekuyera chiridzwa , vibration bvunzo, munyu pfapfaidzo yekuyedza muchina etc.Tine yakasimba maitiro kudzora kwese kwese zvikamu zvatakagadzira. Tine tekinoroji uye manejimendi manejimendi pane yekuongorora muyenzaniso uye mepu, kuvandudza chakuvhuvhu, kugadzirisa kusina chinhu, bvunzo dzekuita
Tine mhando nhatu dzezvigadzirwa zviri Mukati Zvinodzorwa Variable Displacement Compressor, Kunze Kunodzorwa Variable Displacement Compressor uye Fixed Displacement Compressor. Isu tinovavarira kuwana yedu mutengi mvumo uye kuvimba needu akatsiga mhando, yemakwikwi mutengo uye wakanaka basa Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuEurope, kumaodzanyemba nekuchamhembe kweAmerica, kumabvazuva kwepakati uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia nezvimwe.
Tichiomerera kuchinangwa che "mabudiro ebudiriro pahunhu, mukurumbira unovimba nekuvimbika" uye nemabatiro musimboti we "kugadzira kukosha kwevatengi vedu, vashandi nevatinoshanda navo", isu tinoshandura matekinoroji epamberi muzvigadzirwa zvemhando yepamusoro kushandira nzanga uye inobatsira mukuvandudza kweChina mota indasitiri.
Hwakavimbika mhando kusangana nevatengi vedu kudiwa
Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuEurope, kumaodzanyemba nekuchamhembe kweAmerica, kumabvazuva kwepakati uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia etc. Tine vatengi pasi rese. Compressor yedu zvese nyowani nyowani, zvese zvinoriumba zvinobva kune OE mutengesi ane gore rimwe warandi Isu tiri OE mutengesi kuCar fekitori.
Tine makore anopfuura gumi nemana 'ruzivo rwekugadzira uye kusimudzira steering rack. Isu tinogoverawo kumusoro kwekutungamira zvikamu zvemhando muNorth America neRussia.
Ndokumbira kuti ukusiire iwe ruzivo rwekuonana, isu tinokupa Imwe-kune-imwe VIP sevhisi kwauri munguva pfupi.